श्रीमान र छोरालाई बि’च’ल्ली बानाएर हिनेकी आमाको र’ह’स्य खोले पिडित छोराले भन्छन वि’श्वा’स’घा’त भयो घरको अबस्था दयनिय (भिडियो सहित) – Online Khabar 24
श्रीमान र छोरालाई बि’च’ल्ली बानाएर हिनेकी आमाको र’ह’स्य खोले पिडित छोराले भन्छन वि’श्वा’स’घा’त भयो घरको अबस्था दयनिय (भिडियो सहित)
घर परिवारमा केही राम्रो हुन्छ कि भन्ने आशाले बिदेशिन बाध्य नेपाली युबकहरुको अबस्था सुध्रिनुको सट्टा झन ब’त्त’र भइरहेको छ ।
साउन ८ गते देखि घर छाडेकि उनकी श्रीमती अगस्ट २२ तारिखका दिनदेखि भने सम्पर्कमा पनि आउन छाडेको कुरा पनि दिलिपले बताए । कैयौंपटक फोन गर्दा पनि नउठाको तर एकपटक त्यही २२ तारिखका दिन भने भिडियोकलमार्फत सामान्य कुराकानी भएको पनि उनले बताए । कलमा उनकी श्रीमतीले ईन्डिया छु मात्र भनेको तर कुन ठाउ भनेर स्पष्ट नखुलाएको कुरा पनि उनले बताए । भिडियो हेर्न तल थिच्नहोला । यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevदु’खद खबर : एकै पटक जन्मिएका चार सन्तानमध्य दुईको मृ’त्यु !
nextबिहेको त्यो पहिलो रात ! जब उनी सुक्क सुक्क गरेर रुन थालिन् त्यसपछि…..